पहिलो पटक डेटिंगमा जाँदा भुलेर पनि नसोध्नुस् यी ७ प्रश्न | Tungoon
पहिलो पटक डेटिंगमा जाँदा भुलेर पनि नसोध्नुस् यी ७ प्रश्न
एजेन्सी । प्रेमीसँगको पहिलो भेटलाई तपाइँले कहिल्यै पनि बिर्सन सक्नुहुन्न । साथै तपाइँको लागि यो समय धेरै नै महत्वपूर्ण र विशेष हुन्छ । आफ्नो प्रेमीलाई पहिलोचोटि भेट्न जानुअघि तपाइँले आफूलाई मानसिक रुपमा तयार गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ ।
आफ्नो प्रेमीसँगको पहिलो भेटमा तपाइँले बोल्नुभन्दा अगाडि सोच्नुपर्ने हुन्छ । किनकी केही प्रश्नहरु यस्ता हुन्छन् । जस्लाई तपाइँले सोध्नाले तपाइँको सम्बन्ध बिग्रिन सक्दछ । आफ्नो प्रेमीलाई मन नपरेको प्रश्नहरु सकेसम्म नसोध्नुहोस् । तपाइँले सोध्नै नहुने ७ प्रश्नहरुबारे आज हामी तपाइँलाई जानकारी दिन्छौं । जुन निम्नानुसार छ ।
१) के तपाइँ अहिले पनि पहिलाको प्रेमीसँग कुरा गर्नुहुन्छ ?
बितिसकेको समयको बारेमा कहिल्यै पनि कुरा नगर्नुहोस् । पहिलाको प्रेमीको बारेमा कुरा गरेर आफ्नो पहिलो भेटलाई नरमाइलो नबनाउनुहोस् । र दुबैलाई चासो लागेको विषयमा मात्र कुरा गर्नुहोस् ।
२) तपाइँको विवाहको योजना के–कस्तो छ ?
भविष्यमा सँगै जीवन बिताउने सोच भएपनि विवाहको बारेमा सिधै प्रश्न नगर्नुहोस् । तपाइँ दुबैजनाले एकअर्कालाई धेरै मनपराउनुभए पनि आफ्नो प्रेमीसँगको पहिलो भेटमै यससम्बन्धि प्रश्न गर्नु राम्रो हुदैंन ।
३) तपाइँ कति कमाउनुहुन्छ ?
तपाइँ आफ्नो प्रेमीसँगको पहिलो भेटमा हुुनुहुन्छ । त्यसैले यस समयमा कमाईसम्बन्धि तपाइँको प्रश्न सहि नहुन सक्छ । यो धेरै नै संवेदनशील कुरा भएकोले यस विषयमा कुरा गर्नाले दुबैलाई नरमाइलो महशुश हुन सक्दछ ।
४) के तपाइँ मलाई माया गर्नुहुन्छ ?
एक अर्कालाई माया गरेको महशुश हुनको लागि समय लाग्दछ । त्यसैले यससम्बन्धि प्रश्न गर्नको लागि हत्तार नगर्नुहोस्
५) तपाइँले अन्तिम पटक शारीरिक सम्बन्ध कहिले राख्नुभएको थियो ?
यस्तो प्रश्न तपाइँको प्रेमीलाई मन नपर्न सक्छ । त्यसैले प्रेमीसँगको पहिलो भेटमा नै शारीरिक सम्बन्धको बारेमा नसोध्नुहोस् ।
६) म कस्तो देखिरहेको छु ?
आफ्नो वरिपरि मानिसहरु भएको बेलामा प्रायजसो महिलाहरुले आफू राम्रो देखेको छ वा छैन भन्ने प्रश्न गर्ने बानी हुन्छ । तर प्रेमीसँगको पहिलो भेटमा यस्तो प्रश्न सकेसम्म नगर्नुहोस् । यो प्रश्न तपाइँको प्रेमीलाई नौलो लाग्न सक्छ । यदि तपाइँको प्रेमीको दिमागमा केही नकारात्मक कुरा छ भने, आफ्नो दृष्टिकोण तपाइँलाई बाँड्नमा सङ्कोच मान्न सक्छ ।
७) के म तपाइँलाई चुम्न सक्छु ?
यदि तपाइँले यो प्रश्न पहिलो भेटमै गर्नुभयो भने , तपाइँको ठूलो गल्ति हुनसक्छ । यस्तो प्रश्न तपाइँको प्रेमीलाई पहिलो भेटमै गरेको चित्त नबुझ्न सक्छ । आफ्नो भावनालाई नियन्त्रण गर्नुहोस् ।
Previousअपनाउनुहोस चाणक्यका यी विश्वचर्चित १० बाणीहरु
Nextगौतम बुद्धका अमूल्य भनाईहरू जसले तपाईको जीवन बदल्ल सक्छ
आज माओवादी केन्द्रका नेताहरुद्वारा सर्वोच्च अदालतमा पुनरवलोकन निवेदन दिने तयारी
ओखर बगैंचा बन्ने
गलत बाटोबाट गरिने यस्ता नियुक्ति प्रयासहरू तत्काल बन्द गर्न र जनताको जीवन रक्षामा ध्यान केन्द्रित गर्न माधवकुमार नेपालको आह्वान